VAOVAO TSARA HO FANTATRA (13/09/11) - rov@higa
VAOVAO TSARA HO FANTATRA (13/09/11)
13 Septembre 2011, 23:12pm
Tsy angatahina intsony ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA (+vidéo)
Tsy misy ahiana intsony ny fandresen’ny vahoaka Malagasy satria efa azo tsapain-tanana izany ankehitriny. Ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA Marc sy ireo sesitany rehetra dia efa azo fa tsy mbola iadiana intsony akory. Ny fomba anatanterahina izany no imasoana ankehitriny. Tsy very maina any tolona niaretan’ny vahoaka nandritran’ny telo taona latsaka satria ankehitriny tsy mijanona eo amin’ny ankolafy telo intsony ny fitakiana ny fialan’I TGV.
Vondron’olon-tsotra maro no mahatsapa fa tsy avotra intsony ny firenena raha mbola mitohy ny fibodoana fahefana ataon’ny FATE. Isan’ny mitaky izany ireo Raiamandreny aram-pomban-drazana ary efa nanao fanambarana mikasika izany fitakiana izany. Ny hevitra tsy itovizan’ny mpandala ny ara-dalàna amin’ireto “mpitan-kazomanga” ireto dia ny tsy fankatoavan’izy ireo ny hilsatahan’ny Filoha RAVALOMANANA amin’ny fifidianana. Ho an’ny Ankolafy telo dia tsy tokony misy olom-pirenena Malagasy sakanana tsy handray anjara amin’ny fifididnana aorian’izao krizy izao. Ny fanaovana izany dia hiteraka olana vaovao indray eto amin’ny Tanindrazana satria ny mpomba io mpiray tanindrazana ahilika io dia tsy hankato velively izay valim-pifidianana hivoaka eo. Tokony ho tontolo nahafahana mitrandraka fahaizana mampihantra ny demokrasia ny telo taona niainana tao anaty krizy mba tsy ho maty momoka fotsiny ny fahoarian’ny Malagasy.
Fanaovan-tsonia : manana ny lazainy i TGV (+vidéos)
Taorian’ny “ultimatum” nomen’ny FATE an’ny SADC dia nanapa-kevitra izy ireo fa hanao amboletra amin’ny fanaovan-tsonia sori-dalana sandoka. Ilay taratasy nalefan’ny sekretera mpanatanteraky ny SADC tamin’ny volana Jiona no hataon’izy ireo sonia satria hono io no fanintsiana natao tamin’ny tondrozotra nataon’izy ireo rangom-pohy teny Ivato. Tsy vitan’izany fa dia sahin’I TGV ny milaza amin’ny hainoamanjrey fa ny SADC no nanome an’io daty 16 Septambra io ary tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoan’ny iraka manokana handalo eto Madagasikara izany fanaovan-tsonia izany. Tamin’ny fahatongavan’ireo mpisava lalana ny iraky ny TROIKA anefa dia nilaza mazava izy ireo fa tsy mbola misy resaka fanaovan-tsonia aloha hatreto.
Tsy hitondra zava-baovao amin’ny fiainam-pirenena izany fanaovan-tsonia hataon’ny FATE izany satria tsy hampihontsona ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Diso tanteraka ny mpanongam-panjakana raha mihevitra fa tsy matotra toa azy izao tontolo izao. Tsy hiova hevitra velively ny SADC na hisy na tsia ny fanaovan-tsonia amin’ny zoma 16 Septambra. Tsy misy tondro zotra ankoatrin’ny tapaka tany Sandton no hasiana fanintsiana sy hatao sonia eto Madagasikara. Ny fanaovana tery vay manta hanao sonia taratasy hafa dia hanamafy ny fahotana mahafaty efa nataon’I TGV hatramin’ny 2009 nomankaty. Raha ny soniany rahateo tsy hanan-danja intsony satria izy ihany no efa nanao tsinontsinona izany taorian’ny fifanarahana tany Maputo sy ny tovana tany Addis-Abeba.
Ignace (Moramanga) : Jereo Vidéo
Manoela (Tuléar) : Jereo Vidéo
Ankolafy telo sy V6 Nampitovy tadin-dokanga
Nitohy teny amin’ny lapan’ny Antenimierandoholona Analamahitsy omaly ny fihaonana teo amin’ny Ankolafy telo sy ny V6, mpanao sonia ny Dina Repoblikana, taorian’ny dinika savaranonando tao amin’ny Villa Elisabeth Ivandry ny zoma 09 septambra teo.
Tsy nisy nanao fanamarihana rahateo taorian’iny fihaonana voalohany iny na avy amin’ny andaniny na avy amin’ny ankilany ka nilaza fa tsy mahasolotena ny vondrona na ankolafy tsarairay ny mpandray anjara tao. Taorian’ny dinika sy adihevitra naharitra andim-pamantaranandro telo mahery teo omaly, nampitoviana ny tadin-dokanga dia nanapaka ireo mpivory fa iaraha-manaiky ny fiaraha-mitantana aorian’ny fanasoniavana ny sori-dalana. Tanterahana avy hatrany ihany koa ny fampihavanam-pirenena sy ny famotsoran-keloka ary ny famoahana ireo gadra politika sivily sy miaramila rehetra aorian’izay.
Tokony hojerena akaiky ihany koa ny lalàna fenitra mifehy ny tetezamita aorian’io sonia io. Nifanaiky fa ekena ny fodian’ny filoha Didier Ratsiraka tsy misy hatak’andro ary averina aminy ny zony maha filoha teo aloha azy. Ekena ihany koa ny fodian’ny filoha Ravalomanana eto an-tanindrazana. Takiana ny hamoahan’ny solontenan’ny Troïka ny tondrozotra nasiam-panovana farany izay hatao sonia. Ankoatra izay dia napetraka fa tsy maintsy miezaka ny vondrona 11 mitady vahaolana ahazoana mivoaka amin’ny krizy sy hahazoana ny fankatoavana iraisam-pirenena ka tondrozotra mifanandrify amin’io no hosoniavina.
Takian’izy ireto ihany koa ny hanaovana ny CFM ho rafi-panjakana. Nifanaraka koa ny teny Analamahitsy ny hanendren’ny Ankolafy telo ny praiminisitry ny tetezamita tena izy. Araka ireo rehetra ireo dia fepetra sy marimaritra niraisana farany tapak’ireto V9 ireto ny tsy fankatoavan’ny Ankolafy telo delegasiona hafa afa-tsy ny V6 nanao sonia ny Dina Repoblikanina, izay nanaraka akaiky ny fivoriana tao Gaborone, tetsy Ivandry ary io tao Analamahitsy io, ireto farany indray no hanao tatitra ny fihaonana amin’ny TGV sy ny UDR-C hahafahana manitatra ny mpidinika. Noraketina an-tsoratra ireo fotokevi-dehibe valo niraisana teny Analamahitsy, ary nosoniavin’ny mpitarika ireo vondrona mpandray anjara isanisany avy.
Fihaonan’ny Vondrona 8 Namoaka fehin-kevitra niraisana
Na dia teo aza ireo nivoaka niala ny efitrano nivoriana tao Anosikely omaly, dia nahatafavoaka fehin-kevitra ihany ry zareo V8.
Nanao sonia ity fehin-kevitra ity avokoa ny rehetra afa tsy ny Les AS izay tsy tao intsony ny mpitarika azy dia i Voninahitsy Jean Eugène. Tapak’izy ireo ary mikasika ny fandrindrana anatiny fa miteny amin’ny feo sy hevitra iray ny V8 mandritra ny fihaonana sy fivoriana izay mety hotanterahana. Izay rehetra miteny amin’ny anaran’ny vondrona iray dia tompon’andraikitra amin’izany. Mikasika ny sori-dalana kosa, dia ny fanovana amin’ny andalana faha-20 tamin’ny 17 jona nankatoavin’ny Sekretera mpanatanteraky ny SADC Dr Salomao no hatao sonia amin’ny 16 septambra izao.
Tsy maintsy atao kosa, hoy izy ireo ny fanatonana ny Ankolafy telo ary misy taratasy mitovy omen’ny vondrona valo azy ireo mialoha izany. Hahazo taratasy ihany koa ny SADC raha ny fanambarana nataon’ireto V8 ireto. Nanao sonia izany moa Atoa Benjamina Ramanantsoa (Escopol), Ndremanjary Jean André (HPM), Pierrot Rajaonarivelo (MDM), Lanto Rakotomavo (TGV), Marson Evariste (UDR-C) ary ny solontenan’ny GMMR sy ny TIM izay tsy voatonona anarana no tsy hita tao anatin’ny taratasy nisy ny sonia.
Serge Zafimahova “Ny Ankolafy 3 no tokony hanendry ny praiminisitra”
Ho an’i Serge Zafimahova avy ao amin’ny CNOSC dia ny fanapahan-kevitry ny filoham-panjakan’ny SADC tany Sandton Afrika Atsimo no manana lanjany kokoa noho ny taratasy navoakan’ny Sekretera mpanatanteraka, Dr Tomaz Salomao, satria ny fivoriamben’ny filoham-pirenena no manapa-kevitra sy tompon’ny teny farany, raha ny fitsipika mifehy ity fikambanana ity no arahina.
Nanamafy ihany koa ity mpikambana ao amin’ny CNOSC ity fa tokony hizotra tsara ny fifampidinihana eo amin’ny samy Malagasy raha toa ka tsy misy ny be saina sy tia tena, ary tokony hanaja ny fifandaminana ny rehetra, nasiany tsindrim-peo manokana toy ny hoe : raha toa ka efa neken’ny rehetra fa i Andry Rajoelina no filohan’ny tetezamita, dia tokony ho avy amin’ny Ankolafy 3 izany no hipoiran’ny praiminisitra. Rehefa voalaza fa afaka mody an-tanindrazana ireo nanao sesitany ny tenany dia aleo hody izy ireo.
Raha tena mihevitra ny handamina ny firenena marina ihany koa isika, hoy i Serge Zafimahova dia tokony hohafainganina ny fampihavanam-pirenena ka hatsangana ilay vaomieran’ny «fahamarinana sy ny fampihavanana» (Vérité et réconciliation), ka amin’ny alalan’ny asa ataon’izany vaomiera izany no handaminana ireo fifandirana maro be nisy teto amin’ny firenena hatramin’izay fa tsy hoe ny nitranga tamin’ny 2009 ihany. Nanamarika moa ity mpikambana ao amin’ny CNOSC ity fa matoa mikatso sy mihisatra ny fifampidinihan’ny samy Malagasy dia misy ireo vondrona na ankolafy na mpanao politika mitsivalam-pandry amin’ny ezaka atao ary mbola misy koa ireo tia tena ka tsy mieritreritra afa-tsy ny sezany.